Ekwela Ka Niile Dere Ya Na Usoro Nhazi | Martech Zone
Nwere ezigbo mkparịta ụka na otu n'ime ndị ahịa anyị na ngwụsị izu nke na-enyocha ma na-arịọ maka nzaghachi banyere saịtị ahụ, nchịkọta, na ajụjụ ndị ọzọ gbasara atụmatụ ịzụ ahịa inbound. M hụrụ n'anya na eziokwu na ha na-emekwa ụfọdụ, ọtụtụ n'ime ndị ahịa anyị na-adịghị… ma mgbe ụfọdụ mgbalị ọ na-ewe na-aza na-akọwa ihe mere anyị na-eme na-ewepụ n'ezie ọrụ onwe ya.
Otu okwu dị mkpa bụ na naanị ihe ha mefuru is a na-agbaso usoro ịba ụba nke ahịhịa n'ịntanetị. Ọ bụ ezie na m hụrụ eziokwu ahụ n'anya na anyị na-elekọta nke ahụ, ọ na-atụ m ụjọ na nke a bụ naanị atụmatụ a na-etinye na ya. A na m agwakarị ndị mmadụ na iwulite ọnụnọ dị n'ịntanetị dị ka iwu ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ọ restaurantụ orụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Lọ ahịa ahụ kwesịrị ịdị na etiti (ọchụchọ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya), kwesịrị ịdọta ndị ọbịa ziri ezi (imewe na izi ozi) ma kwesịrị ịtụgharị atụmanya n'ime ndị ahịa (ịkpọ oku na peeji nke ọdịda).
Ma ọ bụrụ na ị na-ewu a mara mma ụlọ ahịa, chọta ya nke ọma, na ike tọghata gị ọbịa n'ime ahịa… ọrụ adịghị agwụ:
Ka dị mkpa ịdị na-arụsi ọrụ ike kwalite ụlọ ahịa gị. Achọghị m ịma onye ị bụ, ọ dị mkpa na ị pụọ ebe ahụ wee pịa anụ ahụ, wuo ihe na-eso, ma soro ndị ọzọ nọ n'obodo ahụ. Nnukwu ụlọ ahịa na nnukwu ọnọdụ yana oke mmadụ na ngwaahịa ka na-achọ nkwalite site n'oge ruo n'oge. Dịka onye nwe azụmaahịa, ịnweghị ike ịnọdụ ala chere ka azụmahịa ahụ bịa, ị ga-aga chọọ ya ka ị na-eche usoro ịzụ ahịa ịntanetị gị ịzụlite.
Atụmatụ okike dị ka okwu onu nwere ike itolite azụmaahịa gị, mana ọbụghị oke ọsọ ịchọrọ ya! WOM bụ atụmatụ dị oke egwu ma na -emepụta ihe kachasị mma. Mana ndu ndị ahụ na - ewe oge - yabụ ịnwere ike ịnyekwu onyinye iji kwalite okporo ụzọ ngwa ngwa. Ma ọ bụ, ị nwere ike ịzụrụ ịzụ okporo ụzọ site na ịkwụ ụgwọ site n'otu ịpị, nkwado na ọbụbụ mgbasa ozi. Ọ dị oke ọnụ, mana enwere ike ịnweta gị ọtụtụ okporo ụzọ ngwa ngwa.
Organic na-ewe oge. Nnukwu usoro ịzụ ahịa n'ịntanetị na-ewuli mkpa na ikike ntakịrị oge. Ka ị na-akwụ ụgwọ ụgwọ ahịa, omume dị elu abụghị nkasi obi mgbe niile mgbe enwere ụgwọ ndị ọzọ na-abata karịa ego ha ga enweta… mana ị ga-elele nrịgo elu ahụ na-ewu ewu ma na-ele ya anya otu afọ, afọ 2 na afọ 5 pụọ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-etinye ego na ntanetị ma na-atụ anya na ha ga-enwe azụmaahịa niile ha chọrọ na 60 ruo 90 ụbọchị na-esote. Ọ naghị adịkarị otú ahụ.
Ekwela ka ihe ọ bụla na-eto eto. Ma ọ bụ… ọ bụrụ na ịmee, jide n'aka na ịhapụ oge na akụrụngwa iji nyere aka kwalite ma nweta okwu ahụ na usoro ịre ahịa ịntanetị gị. Nweghị ike ịwụnye ụyọkọ ego n'ime websaịtị mara mma yana ọdịnaya dị mma ma tụọ anya nsonaazụ dị mma - enwere ihe ị ga-eme. Nanị ihe m chọrọ maka onye ahịa a bụ ka ha tinye mgbalị dị ukwuu n'ọrụ ha nwere ike ijikwa kama ịdọrọ uche anyị. Ha nyere anyị atụmatụ ha… ma na-esote onye ahịa ahụ, ọ dịghị onye chọrọ ka ọ nwee ihe ịga nke ọma karịa ka anyị na-eme!
Tags: atụmatụ offlineonline ahia azumonline atụmatụ
Atụmatụ ịre ahịa kwesịrị ịgbachitere nke ọma. Atụmatụ uto organic n'ịntanetị dị mkpa, mana ọ ga-arụ ọrụ kacha mma n'ime ogologo oge mgbe ya na mbọ ahịa ndị ọzọ so. Ịchọghị itinye akwa gị niile n'otu nkata ebe ọ bụ na ndị na-azụ ahịa nwere ike imekọrịta ihe na ika gị n'ọtụtụ ebe aka dị iche iche.